Fekitori yedu yakatora chikamu chekuratidzira gore rino, takaratidza dhizaini yedu nyowani yegirazi regirazi gonhi, rekutengesa girazi remuchina gonhi, vatengi vazhinji vakauya kuimba yedu, vakaratidza kufarira zvakanyanya pamusuwo wedu wegirazi, pane zviratidzo zvekuti indasitiri yedu iri kukura.
na admin pa 21-03-22
ZHEJIANG YUEBANG GLASS CO., LTD. yatanga kuvakwa kwechirimwa chitsva, icho chinotarisirwa kupedzwa muna Zvita 2021. Chimiro chitsva chinofukidza nzvimbo ye15,000 square metres. inosanganisira mauriri maviri ewekishopu uye mana pasi ehofisi. Mushure mekunge chirimwa chitsva chamiswa, Tichawedzera imwe insu...
LED Girazi Door chigadzirwa chakajairwa chakagadzirwa nekambani yedu kune vatengi mumunda unotonhorera. Chigadzirwa chacho chinoshandisa 4mm Low-E Tempered Glass + 4mm Tempered Glass, LED logo yakakomberedzwa pa acrylic kana yakamirirwa paGirazi uye inoiswa pakati peiri girazi rine hasha. Kazhinji kuratidza maitiro ari kubheta zvakanyanya ...
Kusvika ITSVA munaGunyana - Frameless Painting Glass Door ine Round Corner
na admin pa 20-09-07
Mushure mekuunzwa kweSquare Corner Glass Door neAdd-on Handle muna Chikunguru. Nhasi, tinoda kukuzivisa iwe hanzvadzi yake, Round Corner Glass Door. Zvinotsanangurwa Pazasi: Gadzirisa Pendi Inowanikwa Yekuwedzera-Pa Handle uye Aluminium Frame Inogadziriswa Size Kaviri kana Katatu Glazin...
Kusvika Kutsva muna Chikunguru - Square Corner Freezer/Cooler Glass Door
na admin pa 20-08-13
Nekuwedzera kwechishuwo chekunakisa, YB Girazi ramba uchitarisa pane zvigadzirwa uye dhizaini yekunze. Nhasi, tinoda kukuzivisai dhizaini nyowani - Frameless Glass Door ine Add-on Handle. Sirika Kudhinda Kutenderedza Wedzera-paAluminium Handle Aluminium Frame Yakaderera-E yakashatirwa ...
Chimwe chinhu chausingazive nezve condensation paGlass Door Fridge yako
na admin pa 20-07-20
Condensation Wanga uchiziva here kuti mafiriji emagonhi egirazi anoumba condensation (mvura) kunze kwegirazi munzvimbo dzine hunyoro hwakanyanya? Izvi hazvingope kutarisika kwakashata chete, asi zvinogona kukonzera kuti mvura iumbe pauriri hwehuni, zvichikonzera kukuvara kusingagadzirike kana kuita kuti uriri hwematairi hutsvedze zvine njodzi. Kwete izvozvo...
Unonyatsoziva Tempered Glass?
Girazi rakapfava rakapfava kana kuomeswa girazi imhando yegirazi rekuchengetedza rinogadziriswa neanodzorwa kupisa kana kemikari kurapwa kuti iwedzere simba rayo kana ichienzaniswa neyakajairwa girazi. Kupisa kunoisa nzvimbo dzekunze mukutsikirira uye mukati muite makakatanwa. Kushushikana kwakadaro kunokonzera girazi, kana br ...